Shakti: processor yeIndia iri pano ... uye inotarisira kukwikwidza kupokana neIntel | Linux Vakapindwa muropa
Si Europe iri kutogadzira yayo yakajairika-chinangwa microprocessor pamwe chete naye EPI chirongwa, India haina kuita basa. Kwave kwatove nekuyedza kwakati wandei seizvi, senge rakakurumbira Russian Elbrus. Handizive kana iwe uchirangarira icho, Russian microprocessor yakavakirwa paSPARC. Asi ikozvino zvinhu zvakanyanyisa kukomba, uye aya matsva dhizaini ari kubuda ane yakasimba kwazvo uye yakanaka ISA yekushandira uye kuvaka iyo microarchitecture pane. Ndiri kureva RISC-V.
Iye zvino India zvakare ine microprocessor Yakagadzirwa muIndia. Inodaidzwa kuti Shatki uye iwe unogona kuona rumwe ruzivo pawebhusaiti yepamutemo, asi zvinoita kunge chirongwa chinonakidza kwazvo. Uye kana zvinotarisirwa zvikaitika, tinogona kuva nazvo pamaPC munguva pfupi, tichikwikwidza neIntel uye AMD machipisi, asi nemitengo yakachipa. Kana zviri zvekuita, isu tichaona, asi kwechinguvana, ese mapurojekiti matsva aya haana kungoitirwa kuti ave nemitengo yakaderera dzimwe nzira dzine kudzoka kwakaderera, asi asi izvo zvinoitirwa kuve nesimba.
Muenzaniso ndeye EPI, iyo inozoshandiswawo kune vakanyanya makomputa. Vhura nyaya yaShatki, processor weIndia, yagadzirira uye Indian Institute of Technology (IIT) Madras yakaburitsa software yekuvandudza kit yayo. Iyo SDK inobvumidza vanogadzira kuti vagadzire maapps eichi chip chinoenderana neISA RISC-V.
Iyo Shatki chip yakapihwa mari ne Ministry of Electronics uye Information Technology yeIndia, chimwe chinhu chakafanana nezvavakaita kuno kuEurope, rinova chirongwa chekushandira pamwe chakapihwa mari neEU. KuIndia vanoita kunge vari kuteedzera nhanho dzakafanana futi. Iri boka rave rinotungamira mukusimudzira kwaro RISE kubva kuIT uye vanga vachishanda pariri kubvira 2016.
El zano ndere kuvhura makirasi matanhatu eva processor. Imwe neimwe ichave nechinangwa chakasiyana kana musika wehunhu hwayo hwekuita uye kushandiswa kwesimba. China, India neEurope varikuto shanda nesimba kune vasingavimbe neUnited States, uye izvi zvinonetsa zvinhu kune vagadziri vemazuva ano vakaita seIntel ne AMD.
Ivo havasi kunyatso kutengeswa panguva ino, asi ne SDK kunze, vagadziri vanogona kutogadzira software isati yatomboburitswa. Asi haisi runyerekupe kure nazvo, uye haufungi kuti zvinotora makore mazhinji. Kuvhurwa uku kuchaitika munguva pfupi iri kutevera uye chinhu chakanyanyisa.
Kufanana neEuropean EPI, inozotemerwawo zvikamu zvakasiyana, senge supercomputing, yakaderera kushandisa, mota uye neyevatengi komputa, nyaya yaShatki yakafanana nemakirasi akati wandei anozivikanwa. Kana uchida ziva makirasi eiyi microprocessor Ndizvo:
Kirasi e: Iyo processor inovavarira yakadzamidzirwa kana midziyo yakadzamidzirwa, senge madiki madiki maIoT, marobhoti mapuratifomu, vatyairi vemota, kushandiswa kwemaindasitiri, nezvimwe. Ichakwikwidza kurwisa madiki microcontroller machipisi.
Kirasi c: Iyo 32-bit microcontroller ine nhanho shanu, zvichienzaniswa ne5 mune yapfuura imwe. Muchiitiko ichi, inotsigira kumhanya kubva ku3 Mhz kusvika 200Ghz. Iyo yakanangana nepakati-renji chikumbiro chebasa uye ine yakaderera simba rekushandisa chimiro, pamwe nerutsigiro rwekuchengetedza ndangariro. Ichakwikwidza nema microcontroller uye mamwe akadzika-magetsi machipisi.
Kirasi I: Iyo processor ine kunze-kwe-kuuraya kuuraya uye inomhanya pakati pe1.5 ne2.5 Ghz ine multithreading. Mune ino kesi, inoitirwa kuti ishandiswe kune nhare mbozha uye network zvinoshandiswa senge ma routers, nezvimwe. Ichakwikwidzana nemaARM.
Kirasi m: Ndiyo imwe processor ine simba kana nhevedzano ine multicore uye inogoverana hunhu neClass I. Ichave iine anopfuura masere ekugadzirisa macores, nekudaro, yakanangana nekushandisa kunoda kuita kwakawanda. Mune ino kesi, yePC .Inogona kukwikwidza neiyo AMD Ryzen uye Intel Core.
Zvidzidzo: Shakti S Kirasi inoitirwa mashandiro uye maseva. Iyo yakavandudzwa vhezheni yeClass I. Ndiyo imwe nzira kune iyo Xeon kana EPYC, kunyangwe kuita kwacho kuchiri kusazivikanwa.
Kirasi H: Ndiyo yepamusoro soro processor yezvose, yakagadzirirwa supercomputing. Rimwe remabasa aro akakosha kusanganisa yepamusorosoro kuita-tambo, L4 cache, uye matekinoroji ekuvandudza kuita kweI / O mumunda weHPC
Makirasi ekuyedza: RISE iri kushandawo pamakirasi maviri matsva muchikamu chekuyedza panguva ino. Aya ndiwo kirasi T uye kirasi F. Mune ino kesi, yekutanga ichave yakagadzirirwa kuchengetedzwa kuri nani (kufashukira kudzivirira, kurwisa kudzikisira, ...), uye yechipiri yakanangana nekuvandudza kirasi T nerutsigiro rweECC ndangariro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Shakti: processor yeIndia iri pano ...